Godina Arsii Lixaatti magaalotaa fi baadiyaan hundi, OPDO fi woraanni ari’amee, harka bulchiinsa ummataa jiru | Fighting for Freedom and Equality
Godina Arsii Lixaatti magaalotaa fi baadiyaan hundi, OPDO fi woraanni ari’amee, harka bulchiinsa ummataa jiru
Posted by Gishe Abdi Wako on February 18, 2016
Sochii guyyoota muraasaaf osoo wolirra hin citin geggeeffameen ummanni godina Arsii Lixaa sadarkaa guutummatti jechuun danda’amuun naannoo isaa harka lukkee Woyyaaneetii, OPDO, baafachuu gayeera. Angawoonni OPDO heddu ummatatti makamaniiru; kana booda diinaaf hin hojjannu, ummata keennas hin saaxilluuf kakatanii. Kanniin baqatan eessa akka seenan hin beekamu. Waajjiroonni OPDO aanaa Kofalee, Shaashamannee, Kokkossaa, Qoree, Ajjee fi Siraaroo kan magaala fi baadiyaa guutummatti gara cileetti geeddaramaniiru. Yeroo kanatti, OPDOn godina Arsii Lixaa hantuuta boolla hin qabne taateerti.
Humni Agaazii fi federaalaa gara Ajjee, Siraaroo fi Shaallaa gadi bu’uuf onnee hin arganne. Daandii Dodolaa fi Adaabbaa irra lammii malee diinni yoo socho’u hin mudhanne. Ummanni naannoo kanaa ajjeechaa fi dararaan yeroo addaddaatti irratti raawwatame (Asaasa, Kofale, Adaabbaa fi kb) kan isa hin jilbiiffachiisne ta’uu mirkaneesseera.
Godinuma kanaa keessatti Adaamii Tulluu fi Goobetti kan argaman horsiisa horii Woyyaanee gurguddaa lama ibiddaan tajaajilaan ala godhamee loon ammoo oofatee galeera, ummanni. Callaan omisha qonnaa Jibuutii fi Arabtoonni Seeroftaa fi Gofoore irraa haamtee ummata afaan qabdee gara Jibuutii fi biyyoota Arabaatti fe’uuf ooydatti wolitti qabdee turte, ummanni Waabee fi Eddoo irbaata ibiddaa taasiseera. Mooraa qonnaa Seeroftaa fi Gofooree irratti haleellaan raawatamuunis dubbatu jiraattonni. Omisha fi mooraa qonnaa Ardaa Etaa, Heeraroo, Xameelaa fi Garaadelaas gubuuf ummanni yaalii cimaa taasisaa jiraachuun barameera. Naannawa magaalaa Bulbulaatti (Shaashamannee fi Baatuu jidduu) konkolaataan Al Amuddiin 5 gaaza isaa woliin boba’eera.
Daandiin gara magaalota godinichaatti geessan bakka hundatti ummataan (dhagaa, mukaa fi ibiddaan) cufamuun sochii woraanaa mootummaa hedduu danqee jira. Dhaagaa fi mukni ummanni daandii irratti baay’inaan (Shaashamannee hanga Roobeetti, Dodolaa hanga Boqqojjiitti) tarreesse hujii Agaazii dhagaa guuruu fi daandii qulqulleessuu taasise. Tooftaan addaa ummanni godina kanaa dhimma itti bayaa jiru: Agaaziin daandii qulqulleessee haa xumuruu eeganii idoo itti dhokatanii as bayanii ammas irra deebi’aa dandii cufuu isaaniiti. Bifa kanaan guutummatti sochii Agaazii laamshessuun danda’ameera. Ummata gabrummaan nagaye jedhee dhaabate tasa humni jilbiiffachiisuu kan hin jirre ta’uu ragaa bayutti jirra.
Saboonni ollaa godina Arsii Lixaa (ummanni Sidaamaa fi Alaabaa) ummata Arsiif tumsuuf qophii irra jiraachuun himameera. Hanga ammaattis deeggarsa bifa addaddaa laataa turuu isaaniiti kan dhagayame. Woyyaanee jilbiifachiisuuf wolhubannaan akkanaa jajjabeeffamuu qaba.
Godina Arsii Lixaa fi godinoota Oromiyaa biraa keessatti kan ta’e gocha gootummaan abbaa-irree afoo dhaabatanii naannoo ufii bilisoomsuuti. Woyyaanee jilbbiiffachiisuu fi bilisummaa balbala geette olseensisuuf hunda Oromoo irraa kan eeggamu fakkeenya gaarii Shawaa Lixaa, Gujii, Harargee Lixaa, Wollagga Lixaa fi Arsii Lixaatti ta’e hundi naannoo naannoo isaatti hujii irra oolchuu qofa. Tokkoo tokkoo keennaa irra dirqamni gandaa fi qe’ee keenna qulqulleessuu akka jiru daqiiqaafis yoo ta’e dagachuu hin qabnu.
← UN experts urge Ethiopia to halt violent crackdown on Oromia protesters, ensure accountability for abuses
Ethiopia Is Losing The Internet Wars →